Admin | GURIGA HAWEENKA | Page 30
Admin August 25, 2017	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
asc awalan dhamaan asxaabta nagu xiran waxaan maanta idiin heyna muuqaal yar oo ku sabsan sidii loo nadiifin lahaa faraha ama cijiyay markii aad kalarka marsato.
Sidee Looga nadiifiyaa cidiyaha kalarka walaal fadlan share gareey oo asxaabtada gaarsii
Admin August 25, 2017	Beauty, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Maantay waxaan isla wadaageena Daryeelka Bishamaha Ama Faruuryaha oo ah mid aad iyo aad muhiim u ah qurxinta jirka.
faruurta waxey u baahanatahay daryeel xad dhaaf ah oo ka duwan jirka kale madada aay ka jilicsan tahay.
Yingluck ayaa weli haysata taageero badan
Aasiya Cumar oo aheyd hooyo Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ayaa Isniinti lasoo dhaafay lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska, ka dib marki uu toorreeyay seygeeda oo lagu magacaabo Aden Dahir.
Wariyaha VOA-da ee London , Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa dilkan ka waraystay Ayaan Cabdulaahi Macalin oo ku sugan magaalada Bristol, qaraabo dhowna ay yihiin marxuumad Aasiya Cumariyo odaygeedii Aden Daahir.
Admin August 18, 2017	Lamaanaha, MAXAA CUSUB
Haweeney u dhalatay dalka Canada ayaa dib u heshey faraanti dheeman oo ka lumey 13 sanno ka hor, wuxuuna faraantigan ku dhegenaa oo uu ka dhex baxay xabbad karooto ah oo beerteeda ka baxay.
Admin August 18, 2017	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Gabar toban jir ah oo 7 bilood kahor lagu kufsaday dalka Hindiya ayaa ku dhashay isbitaal ku yaal dalka Hindiya ilmo nool oo caafimaad qaba.
ilmaha dhalay ayaa la sheegay in qalliin looga soo saaray gabar miisaankeeda lagu sheegay labo kilo iyo bar balse caafimaad qabta.
Gabadhan oo aan magaceeda iyo sawirkeedaba saxaafada loo soo bandhigin ayaan ogeyn inay ilmo dhashay,waayo waxaa loo sheegay markii ay ilmaha uurka ku sidey in caloosha uu dhagax ugu jiro.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gabadhan uu faro xumeyn kula kacay nin adeer u ahaa oo guriga kula noolaa kaasoo ay ciidamada Boolisku gacanta ku hayaan.
Waalidka dhalay gabadhan yar ayaa sheegay inaysan xitaa fiirineyn muuqaalka gabadha lagu soo qalay gabadhooda, waxaana gabadha yar oo lagu haynayo muddo toddobaadyo ah kadib la wareegi doono ururada carruurta xanaaneeya inta laga helayo qof damaanad qaada nolosheeda.
Dalka Hindiya ayaa waxaa ku badan falka kufsiga ah,balse waxaa ay haweenka la faraxumeeyay ay iska soo ridi karaan ilmaha labada bile e ugu horeysa. Hase yeeshee sharciga dalka Hindiya ayaa diidaya in la soo rido ilmo uurka hooyada ku koray illaa uu dhakhtar fasaxo.
Admin August 13, 2017	MAXAA CUSUB
Fariimaha la qoro waxay ka mid yihin waxaayabaha ugu badan ee uu qofka adeegsado dunidan casriga ah.Gaar ahaan, marka uu qofka ku Jiro jewi farxadeed ama mid colaadeed waxaa uu aad ugu baahdaa inuu dareenkiisa ku muujiyo qoraal.
Haddaba, sida caadada aheydba, Doorkahaweenka.coma oo aad wax uga qorta arrimaha bulshada ayaa markan idiin soo qabaneysa qoraallo gaa-gaaban oo aad u adeegsan karo dadka uu xiriirka kaala dhaxeeyo.
# Ii xiis ama i necbow,labaduba waa dooqeyga.
# Haddii aad ii xiisto waxaan mar walibo ahaan doonaa Qalbigaaga dhexdiisa.
# Haddii aad i nacdana waxaan xilli walbo ku Jiri doonaa niyadaada.
# Ma hayo waqti aan ku naco dadka i neceb aniga.Sababtoo ah,waxaan mashquul ku yahay Jaceylka kuwa aadka ii jecel.
# Waan oggahay waxaa Jira dad badan oo i neceb,sababtoo ah waxay la tahay inaan aad u xumahay balse hubaashii waxaa sidookale jira dad aad ii jecel,waayo waxay ogyihiin in wanaaggeyga yar uu yahay mid aan been abuur aheyn.
Admin August 13, 2017	QOYSKA IYO NOLOSHA
Faa’idada naas nuujinta: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=382.0
Admin August 13, 2017	Beauty, QOYSKA IYO NOLOSHA